နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ။ - Hello Sayarwon
နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ။
Dr . Phyu Mon Latt မှ ရေးသားသည်။ 10/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သင်ဟာ ကမ်းခြေ တစ်ခုမှာ အနားယူနေသည်ဖြစ်စေ၊ ကပွဲတွေမှာ ကနေသည်ဖြစ်စေ၊ နွေရာသီမှာ ပန်းခြံထဲမှာ အနားယူနေသည်ဖြစ်စေ နေလောင်ဒဏ်ကနေ သင့်အသားအရည်ကို ကာကွယ်ခြင်းဟာ နုနယ်ပျိုမြစ်ခြင်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ အရေပြားကို ကာကွယ်သင့်တာလဲ။
ရှေးတုံးက လူတွေဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့ခြင်းကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုလို့ ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတွေအရ နေရောင်ခြည်နဲ့ ထိတွေ့မှုဟာ မလိုလားအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ အရွယ်မတိုင်ခင် ကြီးရင့်ခြင်းနဲ့ အရေပြား ကင်ဆာကိုတောင် ဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ နေရောင်ခြည် မှာ UVA နဲ့ UVB rays နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မမြင်နိုင်တဲ့ UV rays တွေဖြစ်ပြီးတော့ အရွယ်မတိုင်ခင် အသက်ကြီးရင့်ခြင်းနဲ့ အရေပြားရောဂါတွေရဲ့ အဓိက တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ UV rays တွေ အရေပြားကို ဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ အရေပြားဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ထိခိုက်မှုရော၊ မြင်နိုင်တဲ့ ထိခိုက်မှုပါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မှဲ့တွေ၊ တင်းတိပ်တွေ၊ အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ အရေပြား ကင်ဆာတွေ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
UV rays တွေကြောင့် ဖြစ်တဲ့ အဓိက ပျက်စီးမှုကတော့ နေလောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး နေနဲ့ ထိတွေ့တာ နာရီအနည်းငယ်ကြာရင် စတင်ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ အချို့အခြေအနေတွေမှာ ဒီလိုပျက်စီးမှုဟာ အသားညိုသွားခြင်းကို ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာ သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ တင်းတိပ်တွေဟာ အသားဖြူသူတွေမှာ ပိုအဖြစ်များပြီး နေရောင်ထိတွေ့မှု များတာကြောင့် ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တင်းတိပ်တွေဟာ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးမှုကို ဖေါ်ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တာကြောင့် နေရောင်ကို ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ပြင် UV rays တွေဟာ အရေပြားကို မမြင်နိုင်တဲ့ ပျက်စီးမှုတွေလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အချို့ ထိခိုက်မှုတွေကတော့ ပြန်ကောင်းသွားနိုင်ပြီး အချို့ ဆဲလ် ပျက်စီးမှုတွေကတော့ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်ကြာတတ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကနေ ၃၀ ကြာရင် စုထားတဲ့ ပျက်စီးမှုတွေဟာ အရေးအကြောင်းတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အရေပြား ကင်ဆာကိုပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
UVA rays ဟာ UVB rays ထက် အရေပြားထဲကကို ပိုမို နက်ရှိုင်းစွာ ဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ဟာ အရေပြား ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းကို ပိုမို ပျက်စီးစေပြီး UV rays နဲ့ ယှဉ်ရင် အမဲရောင် အစက်တွေ ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ UVA rays ကို environmental aggressor လို့ ခေါ်ပြီး အရွယ်မတိုင်ခင် အသက်ကြီးရင့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အချို့သူတွေဟာ နေလောင်ထားတဲ့ အသားတွေဟာ တောက်ပမှုကို ပေးစွမ်းတယ်လို့ ထင်ကြပေမယ့် UV rays တွေနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါမှာ melanin ထွက်လာပါတယ်။ ထွက်လာခြင်းဟာ အရေပြားကို ပိုမိုထူလာစေပြီး အရေပြား တောက်ပမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာ အရေပြားကို ကာကွယ်သင့်သလဲ။
အပေါ်မှာ ဖေါ်ပြထားသလိုပဲ UVA rays တွေဟာ UVB rays တွေထက် ပိုအန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ UVB rays တွေဟာ နွေးထွေးတဲ့ နွေရာသီမှာ အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီး UVA rays တွေကိုတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးထိတွေ့နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ မိုးအုံ့နေတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာတောင် အရေပြားဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ UVA rays တွေနဲ့ ထိတွေ့နေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ UVA rays တွေဟာ မှန်တွေကို ထိုးဖေါက်ဝင်ရောက်နိုင်တာကြောင့် နေရောင်ကာကွယ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေဟာ အရေးကြီးပါတယ်။
မိုးတိမ်တွေဟာ လောင်ကျွမ်းစေတဲ့ UVB rays တွေကို ပိတ်ဆို့နိုင်ပေမယ့် အသားညိုစေတဲ့ UVA rays တွေကိုတော့ မပိတ်ဆို့နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် နေလောင်ခံရမယ့် ရာနှုန်းနည်းပါးပေမယ့် အရေပြားဟာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ UVA rays တွေကြောင့် အသားညိုခြင်းနဲ့ အရေးအကြောင်းပေါ်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးအုံ့တဲ့ နေ့တွေမှာတောင် နေဒဏ်က ကာကွယ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ရပြားအကေို နေလောင်ဒဏ်က ကာကွယ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိရှိပြီးတဲ့ နောက်မှာ UVA rays ရော၊ UVB rays ရောကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နေလောင်ခံလိမ်းဆေးတွေကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အရေပြားဆရာဝန်တွေက အပြင်မသွားခင် လိမ်းပေးဖို့နဲ့ သူ့အာနိသင်ကို ထိန်းပေးဖို့ အတွက် တစ်နေကုန် မကြာခဏ ပြန်လည်လိမ်းပေးဖို့တို့ကို ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
Sun protection. http://www.who.int/uv/sun_protection/en/.
Assessed September 29, 2016.
သတိထားရမယ့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV Rays) အန္တရာယ်